सफलताको कथा : जो भैंसी पालेर महिनाको ८ लाख कमाउँछन्...!
ARCHIVE, POWER NEWS » सफलताको कथा : जो भैंसी पालेर महिनाको ८ लाख कमाउँछन्...!
काठमाडौँ- पोखरा नयाँबजारका युवा दीपक तिमिल्सिना । गर्छन् किसानी तर पैसा मनग्य कमाउँछन् । दिनरात भैंसीका लागि नै बित्छ उनको । जानकी एग्रो फर्म संचालन गरेर उनले महिनाको निकै राम्रो रकम कमाउँछन् । महिनाको झन्डै ८ लाख कमाउने उनी लगानीको ब्याज घटाउँदा पनि महिनाको ४ लाख चोखो बचाउँछन् । उनले नयाँबजारमा ३ तले घरपनि बनाएका छन् ।
तिमिल्सिनाका अनुसार उनले सञ्चालन गरेको एग्रो फार्ममा १ सय ७२ वटा भैंसी छन् । ती भैंसीबाट करिव दैनिक ८ सय लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । १२० रुपैयाँप्रति लिटरमा बिक्री हुने दुधबाट उनले मासिक २९ लाख कमाउँछन् । जसमा २१ लाख जति भैंसीको दाना र मजदुरलाइ तलव दिंदा सकिन्छ ।
'अरुले विदेशमा भाँडा माझ्छन्, म आफैं भैंसीको स्याहार सुसारदेखि दुध दुहुने काममा खटिन्छु । यसैमा रमाउंछु ।' उनका अनुसार दुधका लागि बजारको कुनै अभाव छैन । ' छिट्टै नै भैंसीको संख्या २ सय ५० पुर्‍याउने योजना छ ।' उनी भन्छन् , 'एउटा भैंसीका लागि करीब १ लाखमा लगानी गर्नुपर्छ । फर्ममा ४ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छु ।'